Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Iker Casillas Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-enye Full Story of a Goal Keeper with the nickname "Onye Nsọ". Anyị Iker Casillas Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, nzụlite ezinụlọ, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na obere ihe ndị ọzọ amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya iji mepụta ihe nchekwa dị egwu. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle Iker Casillas 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Cesar Azpilicueta Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Iker Casillas Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, Iker Casillas Fernandez a mụrụ na 20th ụbọchị nke May 1981 na Mostoles Community nke Madrid, Spain. Ọ bụ onye mbụ n'ime ụmụ abụọ mụrụ nne ya, Maria del Carmen (onye na-edozi isi) na nna ya, Jose Luis Casillas (onye nkụzi).
Iker Casillas nne na nna Jose na Maria.
Ndị nne na nna ya bụ ndị agbụrụ Spanish nke agbụrụ ọcha na mgbọrọgwụ ndị Europe malitere na Bilbao na Spen maka ọnwa ole na ole tupu ezinụlọ ya emesịa biri n'ebe a mụrụ ya na Mostoles.
A zụlitere Iker Casillas na ebe a mụrụ ya na Mostoles. Ọ bụ nwata ahụ nwere obi ụtọ. Ebe E Si Nweta: RTVE.
Na-etolite na Mostoles n'akụkụ nwanne ya nwoke nke nta - Unia Casillas, Young Casillas enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ akụkụ anụ ọhịa na akụkọ nwata. Ọ bụ kama nwata nwoke dị afọ anọ, rọrọ nrọ ịghọ onye na-eche nche.
Ụmụaka ụmụaka bụ Isco Story Plus
N'ime afọ ndị sochirinụ, Casillas jere ozi dị ka onye na-eche nche mgbe ọ bụla ndị enyi ya haziri egwuregwu bọl na agbata obi ha ma soro nna ya mgbe niile ka ha lelee ụlọ egwuregwu kachasị amasị ha - Athletic Bilbao - na-egwu egwuregwu n'egwuregwu Real Madrid.
Foto dị ntakịrị nke Iker Casillas na-eje ozi dị ka onye na-eche nche n'oge egwuregwu football na agbata obi ya.
Iker Casillas Nwatakiri Ihe omuma - Nkuzi na Ulo oru:
Ihe mmụta Iker Casillas gụnyere agụmakwụkwọ ya na ụlọ akwụkwọ Picasso na Mostoles. Ihe omumu ihe omimi nke guru akwukwo na ulo akwukwo nke ise tupu ya agaa akwukwo Vicente Aleixandre na Mostoles.
Juan Bernat nwata Story Plus na-emeghe akụkọ ihe omuma
Ka ọ na-erule oge Casillas dị afọ 9-10, ndị mụrụ ya hụrụ mgbasa ozi egwuregwu na-ekwu banyere itinye aka na ụlọ akwụkwọ mmuta nke Real Madrid. N'iji ohere ahụ, Casillas nna kpọgara ya na Santiago Bernabeu maka ule na ntinye nke ọ gafere. Otú a ka Casillas si malite ịrụ ọrụ na Real Madrid.
Foto nke Iker Casillas n'oge mbụ ya na Real Madrid. Ebe E Si Nweta: RTVE.
Iker Casillas Biography - Ndụ Mmalite Ndụ na Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'oge Real Madrid, Casillas ji nwayọọ nwayọọ bilie site na igwu na ụmụaka ka ha na-eto eto ntorobịa, na-aga n'ihu ọ bụghị nanị na nkà ma ọ bụ n'omume ọkachamara karịsịa ịdọ aka ná ntị na oge maka ọzụzụ.
A kpọrọ Casillas ka ọ bụrụ onye isi nke Real Madrid n'oge Njikọ Njikọ na Rosenborg mgbe ọ dị afọ 16 na November 1997. Otú ọ dị, ọ nọgidere na-anọchi anya ya na egwuregwu ahụ.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu
Iker Casillas dị naanị afọ iri na isii mgbe akpọrọ ya na ndị otu Real Madrid. Ebe E Si Nweta: RTVE.
Iker Casillas Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'ịga n'ihu, Casillas nọrọ otu oge na Real Madrid's otu C nke o nyere aka merie iko mpaghara, mmepe nke hụrụ ya ka ọ bụrụ atụmanya maka onye nlekọta bọọlụ mbụ.
N'afọ sochirinụ (1999) bụ n'ezie ihe dị ukwuu maka Casillas bụ onye meriri World Cup nke Ndị Ntorobịa ya na ndị otu mba Spanish wee mee ka ọ bụrụ onye mbụ maka Real Madrid na La Liga na Champions League. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Iker Casillas Hụrụ Ndụ Ndụ:
Iker Casillas bụ nwoke lụrụ di na nwunye mgbe ọ na-ede ihe, anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara akụkọ nwoke na nwanyị na nwoke na nwanyị. ịmalite, onye gbara ihe nkwụsị malitere ịlụ Spanish Model Eva González na 2005. Ndị na-ahụ maka ịhụnanya nke gosipụtara mmetụta ịhụnanya ọha na eze maka ihe karịrị afọ atọ na-apụ na mberede n'otu ụzọ dị iche iche na August 2008. Enweghị nwa ma ọ bụ nwa (s) amụrụ site na mmekọrịta ha.
Andres Iniesta Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Iker Casillas dere Eva Gonzalez n'etiti 2005-2008.
Mmekọrịta ndị na-esote na Casillas nwere mmasị na ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa Spanish, Ana Medinabeitia na nke Spanish, Ariadne Artiles nile n'afọ 2009.
Casillas nwere mmekọrịta ịhụnanya na Ana (n'aka ekpe) na Ariadne na 2009.
2010 bụ afọ nke Casillas malitere ịlụ nwunye ya na-abụ Sara Carbonero. Ha bụ mmekọrịta nke mere ihe karịrị afọ 5 tupu ha alụọ na 20 nke March 2016. Ndị di na nwunye ahụ nwere ụmụ abụọ. Ha gụnyere Martin (onye a mụrụ 3rd Jan 2016) na Lucas (nke a mụrụ 2nd June 2016).
Iker Casillas Ndụ Ezinụlọ:
Iker Casillas nwere ezinụlọ dị n'etiti ụlọ. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere Iker Casillas 'Nna:
Jose Luis bụ nna Casillas. Onye nkuzi na nna nke abuo amuru ma zulite na Bilbao ebe o biri oge nwata na ntorobia. Jose dị ezigbo nso na Casillas onye ya na ya na-egwu bọl n'oge ọ bụ nwata. Ha mekwara amụma amụma bọọlụ ọnụ na oge ụfọdụ tụfuru ihe ruru € 1.2 nde (£ 1 nde) n'ihi na Casillas chefuru ịdee ọkwa nna ya nke ọma. Otú ọ dị, Casillas emeela maka ọnwụ site na nnukwu akwụkwọ football football na ego ya.
David Silva Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Echiche
Banyere nne Iker Casillas:
Maria del Carmen bụ nne Casillas. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-edozi isi n'oge oge Casillas, ọrụ nke ya na ụlọ ụlọ. Nne nke ụmụ abụọ hụrụ football n'anya dị ka di ya na ụmụ ya nwoke bụ ndị egwuregwu Athletico Bilbao ma soro usoro ọrụ Casillas nke ọma, na-enye ya nkwado nne mgbe ọ chọrọ ya ma na-ekwu okwu megide mmejọ ọ bụla e mere ya.
Yago Aspas Child Story Plus Ihe na-enweghị isi akụkọ ndụ
Banyere ụmụnne nwanne Iker Casillas:
Casillas enweghị nwanne (s) ma nwanne nwoke a na-akpọ Unia Casillas. Dị ka Casillas, Unai tolitere na-ahụ n'anya ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye mgbaru ọsọ dị ka nwanne ya okenye ma ọ bụ na-edekọ ihe ịga nke ọma na football ọkachamara dịka ọ bụ naanị onye etiti Central Center maka CD Mostoles.
Iker Casillas na nwanne ya nwoke Unai. Ebe E Si Nweta: Facebook.
Banyere ndị Iker Casillas:
Apụghị ezinụlọ ezinụlọ Casillas amachaghị banyere ndị otu ezinụlọ ya dịka nne na nna ya, ụmụnne nna ya na ụmụ nwanne ya. N'otu aka ahụ, o nwere nne na nna ochie yana nna nna na nne nne ndị a na-amatabeghị na ihe ndị ama ama site na nwata ruo n'oge. Otu ọnọdụ ahụ gafere ọkwa maka ụmụ nwanne ya, ụmụ nwanne ya na nwanne nne ya.
Iker Casillas Ndụ Nke Onwe:
Kedu ihe na-eme Iker Casillas akọrọ? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ụdị àgwà Casillas iji nyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu. Iji malite, Casillas persona bụ ngwakọta nke àgwà zodiac nke Taurus ọ bụ onye na-achọsi ike na onye a pụrụ ịdabere na ya.
Na mgbakwunye, o nwere ezi ọchị ma dị mfe nke pụtara ìhè n'oge ọ bụla ọ na-ekpughe ozi gbasara ndụ ya na nke onwe ya. Casillas ntụrụndụ na ọdịmma na-agụnye ịhụ fim, na-eche na enyi na ezinụlọ. N'ịbụ agadi mkpụrụ obi, ọ dịghị enwe mmasị na egwuregwu vidio tinyere ndị metụtara ọrụ egwuregwu.
Iker Casillas na-achọ ka ndị enyi na ndị ezinụlọ ya kwụpụ. Ebe E Si Nweta: Instagram.
Eziokwu Iker Casillas Web:
Iker Casillas nwere ihe ruru nde $ 20 dị ka n'oge ederede. Isi mmalite nke akụ na ụba ya sitere na nkwụnye ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ọ nwetara n'oge ọ dị nso iri abụọ nke ịgba chaa chaa na Real Madrid, FC Porto na ndị otu mba Spain.
Ya mere, ndị na-agba ọsọ ndụ na-ebi ndụ okomoko nke gosipụtara n'ụzọ ọ na-emefu ego na ịnwe akụ dị oke ọnụ. Akụ ndị ahụ gụnyere ụlọ ya mara mma gbasaa na Spain yana ọmarịcha ụgbọ ala ya gụnyere Audis, BMW na Range Rovers.
Ụmụaka Koke na-akọ akụkọ eziokwu
Iker Casillas Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie akwụkwọ akụkọ nwata anyị Iker Casillas ebe a bụ ụfọdụ eziokwu ama ama ma ọ bụ nke amachaghị nke a na-anaghị etinyekarị na akụkọ ndụ ya.
Iker Casillas enweghị tattoos. Ọ bụ ezie na ọ bụ mgbe a na-ese anwụrụ anwụrụ, a hụbeghị ya na-aṅụ mmanya.
Banyere okpukpe ya, a mụrụ Casillas ma zụlite dịka onye Roman Katọlik. Onye na-eche nche ahụ ahapụghị akụkụ okpukpe nke nzụlite ya ka ọ ka bụ onye Katọlik n'oge ederede.
Onye na-egbu ihe na-enweghị akụkọ ihe mere eme nke nwere mmerụ dị njọ ma ọ bụ ọrịa na-egbu ya mgbe a kọrọ na ya nwere obi obi ma ọ bụ obi ọgụ mgbe ọ na-enwe ọzụzụ na Porto na 1st nke May 2019. Ozugbo ahụ, a kpọgara ya n'ụlọ ọgwụ ma kọọrọ ya na ọ ga-adị ọtụtụ awa mgbe e mesịrị.
Ndị na-egwu egwu echeela kemgbe mmelite banyere ọnọdụ ahụike Casillas nke enweghị ike ịjụ dị ka ọrịa. N'ikwu nke a karị, nkụchi obi Casillas na-eme ka ụjọ na-atụ ya banyere ezumike nká ya ozugbo ọ ga-echebara n'eziokwu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 38 afọ. Ka ọ dị ugbu a, ndị Fans na-ezigara onye na-eche nche ozi ọma ya na-achọ ka ọ gbakee.
Iker Casillas Biography Video Nchịkọta:
Biko chọta n'okpuru, nchịkọta vidio YouTube maka profaịlụ a. Obiọma Gaa na Ndenye aha anyị Youtube ọwa maka vidiyo ndị ọzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Akwụkwọ Iker Casillas Anyị na-akọ akụkọ gbasara eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
FC Porto Football Akwụkwọ edemede
Ụdị Mgbasa Ozi Real Madrid
Pau Torres Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nwere ike 22, 2021
Martin Odegaard Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ